xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Ingiriiska ayaa dawladooda UK ugu baaqay inay u hawlgasho sidii ay Somaliland uga mid noqon lahayd beesha caalamka ee ay aqoonsi u heli lahayd. | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Ingiriiska ayaa dawladooda UK ugu baaqay inay...
xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Ingiriiska ayaa dawladooda UK ugu baaqay inay u hawlgasho sidii ay Somaliland uga mid noqon lahayd beesha caalamka ee ay aqoonsi u heli lahayd.
Siddeed (8) xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Ingiriiska ayaa dawladooda UK ugu baaqay inay u hawlgasho sidii ay Somaliland uga mid noqon lahayd beesha caalamka ee ay aqoonsi u heli lahayd.
Xildhibaanadan ayaa shalay oo ay ku beegnayd sannad guuradii 58aad ee ka soo wareegtay markii ay Somaliland xorriyada ka qaadatay Ingiriiska, waxa ay qoraal dheer ku qoreen majalada caanka ah ee Politics Home, waxa ay kaga warameen xidhiidhka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Somaliland iyo Ingiriiska, iyagoo xusay inay ka xunyihiin sida aanay shacabka reer Somaliland maanta u haysan xorriyadaas ay heleen 58 sannadood ka hor ee sida fudud uga luntay. Xildhibaanadan oo caan ku ah taageerista qaddiyadda somaliland ayaa kala ah:
Previous articleDAAWO:-Xukuumaddu Ninka Ay Baanka Iyo Maaliyadda U Dhiibtay Waa Isku Reer,Sicir Bararkiina Halkiisii…Xildhibaan Cali Aareeye
Next articleShimbir baajisay munaasabad weyn oo lagu qaban lahaa Canada